टीकापुरको फोटो ? होइन, अमेरिकाको - South Asia Check
टीकापुरको फोटो ? होइन, अमेरिकाको
केही ब्लगसाइटले यो फोटोलाई आज २०७२ भदौ ७ गतेको कैलालीको टीकापुर घटनाको समाचारमा राखेको छ । फोटोमा क्याप्सन दिइएको छैन । यसले गर्दा यो फोटो आजको टीकापुरको घटनाको हो जस्तो लाग्न सक्छ । यस ब्लगको लिंक सोसल मिडियामा पनि शेयर गरिएको छ ।
हामीले जाँच गर्दा यस्तो पायोः यो फोटो अमेरिकाको फ्लोरिडाको ट्याम्पामा फेब्रुअरी २०१२ मा भएको एउटा घटनाको हो । यो फोटो सबैभन्दा पहिले फेब्रुअरी ७, २०१२ मा वेबसाइटमा राखिएको थियो ।त्यो फोटो यहाँ हेर्न सकिन्छ ।